Senetarada Mareykanka waxay rabaan inay si buuxda sharci uga dhigaan CBD • Dawooyinka Inc.eu
Mudanayaasha Mareykanka waxay rabaan inay sharciyeeyaan CBD gebi ahaanba
Senetarada Mareykanka ayaa soo saaray sharci lagu xadidayo isticmaalka CBD ku jirta cuntada iyo cabitaanka oo markaa gabi ahaanba sharciyeeya walaxda. Xeerarka FDA ayaa ka tagaya waxyaabo badan oo la doonayo marka ay timaado kuleylka iyo CBD ee cuntada.
Ka dib markii Sharciga Beeraha la ansixiyay, FDA ayaa sidaas sheegtay CBD galay daawo. Tani waxay ka dhigan tahay in isticmaalka maaddada ku jirta cuntooyinka ay tahay in loo oggolaado si shaqsi ahaaneed iyada oo loo marayo tijaabooyin caafimaad. Taasi waxay ka dhigeysaa horumarinta wax soo saarka wax aan macquul aheyn. Alaabooyinka ay ku jiraan CBD si ballaaran ayaa loo heli karaa, laakiin waxay ku jiraan nooc aag cirro leh. Taasi waxay ka dhigeysaa soosaarayaasha iyo dukaamada inay u nugul yihiin ficil-celinta FDA ee ka dhigaysa shirkadaha inay diidaan inay suuqa galaan.
Ka dhaafida hemp iyo alaabada CBD
Sharci cusub ayaa meesha ka saari doona hubin la'aantaas iyada oo si cad looga dhaafayo badeecooyinka hemp ee mamnuuca daroogada ee FDA. Maalin kasta oo ay FDA qaadato waqti dheeri ah si loo cusbooneysiiyo xeerarka CBD, beeralayda heersareysa iyo kuwa wax soo saara waxay sii wadaan inay ka fikiraan sida wax u soo saarkooda loo nidaamiyay. Faa'iidooyinka dhaqaale ee shaqaalaha iyo milkiileyaasha ganacsiyada ee Oregon iyo guud ahaan dalka ma ahan kuwa soo socda, "Senator Merkley ayaa ku yiri hadal uu soo saaray.
"Waxyaabaha CBD-ka ee hemp-ka soo jeeda ayaa horeyba loo heli karaa, dhammaantoodna waxaan u baahanahay FDA inay soo saarto sharciyo cad oo iyaga loogu talagalay, iyo sidoo kale cuntooyinka kale, cabbitaannada iyo nafaqeynta nafaqada leh."
Akhri wax dheeraad ah foodprocessing.com (Source, EN)
8 sababood oo ay CBD calool-xumadu caan ugu tahay cunitaanka CBD
CBD waa kiimiko dabiici ah oo laga helo geedka xashiishka. Waxay noqon doontaa…
Wadahadalka Daroogada ayaa dib u soo nooleynaya doodda ku saabsan siyaasadda daroogada
Maanta DrugsDialoog.nl ayaa la bilaabay, oo ah barxad lagu cabbirayo bil kasta bil kasta oo la xiriirta ...
CBD ee caabuqa dabadheeraada
'Anti-bararka' waa erey caadi ahaan maanta loo isticmaalo in lagu iibiyo wax walba laga bilaabo saliidda saytuunka ilaa ...